बैंकबाट पाउने सुविधा जनताको अधिकार, के के छन् अधिकार ? – Insurance Khabar
बैंकबाट पाउने सुविधा जनताको अधिकार, के के छन् अधिकार ?
प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०७६, आईतवार २०:११
काठमाडौं । हाल नेपालमा चार प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहशरु संचालनमा रहेका छन् । क वर्गका वाणिज्य बैंक, ख वर्गका विकास बैंक, ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरु हुन् भने घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय सस्थाहरु हुन् । यी चार प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निति तथा नियमहरु बनाएको छ । सोही निती नियमभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम सोही ऐनको दफा ३१ मा ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ ‘घ’ बर्गका बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ब्यबस्था गरिएको छ । चार प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको काम, कर्तव्य तथा अधिकार यसप्रकारका छन् ।
“क“ वर्गका वाणिज्य बैंकको काम, कर्तव्य तथा अधिकार यस्तो छ
“ख“ बर्गका बैंकको काम,कर्तब्य र अधिकारहरु
“ग“ बर्गका बैंकको काम,कर्तब्य र अधिकारहरु
“घ“ बर्गका बैंकको काम,कर्तब्य र अधिकारहरु